Sawir: Machadka Magaalooyinka ee Cilmiga Casriga (UICA)
Machadka McKnight Foundation wuxuu doortay filim sawirada Seitu Ken Jones si uu u helo abaalmarinta 2017 McKnight Artist Award. Abaalmarinta sanadlaha ah, oo hadda calaamadeynaysa sannadkii 20aad, waxay bixisaa $ 50,000 lacag caddaan ah oo ah shakhsi Minnesota ah oo ka dhigtay wax ku ool ah nolosha dhaqanka gobolka.
"Nidaamyo waaweyn oo la dhisay oo lagu dhisay saldhigga Nicollet ee Nicollet Mall iyo nidaamka socdaalka St. Lin's ee Green Line, aragtida farshaxanka Seitu Jones ayaa noqotay qayb ka mid ah qaybaha aan laxaad lahayn ee muuqaalka dhaqanka ee Minnesota," ayuu yiri Kate Wolford, oo madax ka ah McKnight. "Intii lagu guda jiray xirfad aad u ballaaran oo sawir-qaad ah, farshaxan, fanka masraxa, shaqada dadweynaha, iyo naqshadaynta deegaanka, Seitu Jones ayaa muujisay waxa suurtagal ah marka sawir muujinaya aragti rajo leh iyo ruux maskax leh uu hoos u dhigo xididada qotodheer ee bulshada. Sida aan u dabaaldego sannad-guuradii 20-aad ee abaal-marintan, waxaa si gaar ah u xiiso leh in la ixtiraamo farshaxan sida Seitu, oo ka qaybqaatay dareenka meeshan ee halkan Minnesota. "
Wuxuu ku dhashay waqooyiga Minneapolis 1951, Seitu Jones waxa uu si aad ah u saameeyey Dhaqdhaqaaqa madadaalada iyo madhxiidkiisa dhexe ee farshaxannadu waxaa waajib ku ah inay ka baxaan bulshadooda "ka qurux badan tan ay ka heleen." Muddo shan sano ah mustaqbalkiisa, Jones wuxuu u adeegsaday sida ugu horeysay ee farshaxan-ku-noolaanshaha Magaalada Minneapolis, dadka dhagaystayaasha ah ee la soo dhajiyay oo leh naqshad loo yaqaano xubin firfircoon oo ka tirsan Tiyaatarka Penumbra iyo marxalado kale, oo dhowaan loo sameeyay munaasabado kala duwan oo ah 2,000 oo marti ah "CREATE: Table Community , "Rakibida nus-mile-dheer oo dadweynaha loogu talagalay in lagu dhiso wadahadal ku saabsan helitaanka cunto caafimaad leh.
Xaafad ka mid ah xaafada St. Paul's Frogtown ee kudhisan 20 sano ka badan, Jones sidoo kale waxa uu ahaa talaabo wax ku ool ah oo ka dambeeya shan-acre farmaajo Frogtown iyo mashruucyo kale oo magaalooyinka ah "greenlining". Waxa uu raadiyay in uu kor u qaado wacyigelinta caddaaladda deegaanka iyo in la wanaajiyo helitaanka caga-jugleynta mid ka mid ah labada magaalo ee ugu caansan magaalooyinka kala duwan. Qayb ka mid ah shabakad dhaqdhaqaaqayaal cagaaran oo ka shaqeynaya in lagu beero 1,000 geedo oo ku yaal Frogtown, Jones waa beerta sayniska oo sidoo kale gacan ka geysatay horumarinta isgoysyada cusub ee dabiiciga, farshaxanka, iyo kaabayaasha bulshada. Wuxuu hadda u adeegayaa marxaladiisa seddexaad Degmada Capitol Gobolka Watershed guddi. Wuxuu sidoo kale ka mid yahay aasaasayaasha magaalooyinka Boatbuilders, barnaamijka horumarinta dhalinyarada ee aan faa'iido doonka ahayn oo bara dhirta iyo xirfadaha kale.
Jones waxa loo aqoonsan yahay wada shaqeeye firfircoon iyo awood hal-abuurnimo ee kaqeybqaadashada muwaadiniinta, Jones ayaa lagu sharfay abaalmarino badan iyo isbahaysi, oo ay ka mid yihiin Xog-ururinta Farshaxanka ee Minnesota Gobolka Minnesota, Fannaankii Farshaxanka ee McKnight, Deeq-lacageedka Fananka Fiktooriya ee Farsamada Xirfadaha / Masraxiyadda, iyo Deeq Waxbarashada Dugsiga Dhexe ee Harvard Graduate School of Design. Jones ayaa dhawaan ka fariistay Jaamacadda Xirfadlaha Dhaqanka ee MFA oo ka hawl gala College Goddard ee magaalada Port Townsend, Washington. Wuxuu ku noolyahay oo ka shaqeeyaa St. Paul xaaskiisa, Soyini Guyton, gabayada iyo wadaad beerta.
Jones waxaa soo xulay guddi ka tirsan xubnaha bulshada oo leh aragti balaadhan oo aqoon leh oo ku saabsan degaanka kala duwan ee farshaxanka iyo dhaqanka gobolka, oo ay ku jiraan Lori Pourier, madaxwaynaha, Sanduuqa First Nations; Sandra Agustin, kalkaaliyaha iyo lataliyaha farshaxanka; Eleanor Savage, Agaasimaha Fanaaniinta iyo barnaamijka, Foundation Foundation; Rohan Preston, naqshadeynta farshaxanka, Star Tribune; Brian Frink, Artist iyo Guddoomiye, Waaxda Ardada, Jaamacadda Minnesota State, Mankato.
The McKnight Award Artist Award wuxuu aqoonsadaa farshaxanada doortay in ay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigtaan Minnesota, taas oo ka dhigeysa in gobolkayaga meel hodan ah oo dhaqameed leh. Inkasta oo ay heystaan tayada iyo fursadda ay ugu sii wadi lahaayeen shaqadooda meelo kale, farshaxanadani waxay doorteen in ay joogaan - oo ay joogaan, waxay sameeyeen isbeddel. Waxay aasaaseen oo ay xoojiyeen ururada farshaxanka, dhiirigaliyay farshaxanno yaryar, iyo soo jiidasho iyo dhagaystayaal. Waxaa ugu fiicnaa dhamaantood, waxay sameeyeen wax cajiib ah, feker ah oo fekeraya. Himilada McKnight maalkii farshaxanku waa in lagu taageero fannaaniinta shaqeeya ee abuura oo wax ku biiriya bulshooyinka firfircoon. Barnaamijku wuxuu ku saleysan yahay aaminsanaanta in Minnesota ay soo jiidato marka ay farshaxannadu sii fiicnaato. McKnight Award Artist Award, oo la yimaado $ 50,000, wuxuu tagaa hal fanaaniin Minnesota sannad kasta.
Machadka McKnight wuxuu doonayaa inuu hagaajiyo tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Waxaa la aasaasay sannadkii 1953, waxaana madaxbannaanaa William iyo Maude McKnight, oo ah hay'ad Minnesota ku salaysan oo hanti ku dhow $ 2,2 bilyan ah waxaana la siiyay $ 87 milyan sannadkii 2016. Wadar ahaan, qiyaastii $ 9 milyan ayaa u baxday taageerada fanaaniinta shaqada si loo abuuro loona hormariyo bulshooyinka firfircoon .